किन लिइनन् पूजाले ‘ए मेरो हजुर ४’ को नाम ? के फेरी चिप्लिएकी हुन् पूजा ? – Sandes Post
April 12, 2022 572
काठमाडौँ । नयाँ वर्षको अवसरमा नेपाली फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ देशभर प्रर्दशनमा आउँदै छ । तर ‘ए मेरो हजुर ४’सँग साउथ फिल्म ‘केजीएफ २’ले सामना गर्नु सामान्य कुरा होइन? कोरोनाको असर कम हुँदै गएका बेला यतिबेला हलमा नेपाली फिल्महरु क्रमश प्रर्दशनमा आउन सुरु भएका छन् ।
पूजा शर्मा र सुर्दशन थापको म यस्तो गीत गाउँछुले वाह वाही बटेलेसँगै धमाधममा हलमा फिल्महरु प्रदृशनमा आइरहेका छन् । यसैबिच फिल्म ‘संझना विर्सना’को गीत रिलिज गरियो । सो अवसरमा नायिका शर्मा पनि कार्यक्रममा पुगिन् । नायिका पूजा शर्माले भनिन्–‘हाम्रो फिल्मको ट्रेलर तपाइले केजीएफ २ हेर्दा हेर्न पाउनुहुनेछ । वैशाख १ गतेबाट रिलिज हुने फिल्मसँग हाम्रो फिल्मको ट्रेलर पनि हेर्न पाउनुहुनेछ ।’
पूजाले साउथको फिल्म ‘केजीएफ २’ हेर्दा आफ्नो फिल्मको पनि ट्रेलर हेर्न पाउने तर्क गरिरहँदा प्रश्न उठ्यो, के सोही मितिमा रिलिज हुने ‘ए मेरो हजुर ४’ हेर्दा ‘संझना विर्सना’को ट्रेलर हेर्न पाइदैन र रु पूजाले आफ्नो मुखमा ‘केजीएफ २’ आएकाले सोही फिल्मको नाम लिएको बताइन् । आफूले बोल्न नजानेपनि मनसाय नेपाली फिल्मलाई होच्याउने नभएको भन्दै उनले आफ्नो बचाउ समेत गरिन् ।
बोल्दा बोल्दै चिप्लिएकी पूजाले आफ्नो भनाई सच्याउँदै वैशाख १ गतेबाट रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’लाई शुभकामना दिइन् । उक्त कायृक्रममा पूजाले गरेको व्यबहार देखेर उनले विर्सिएरै ‘ए मेरो हजुर ४’को नाम नलिएकी हुन् की जानी जानी नलिएकी हुन् भन्ने विषयमा चर्चा चलेको थियो ।
Prevबढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Nextईन्द्रेणिका कृष्ण कंडेलको घरमा भेटियो यतिधेरै पैसा , कृष्ण कँडेल यसो भन्छन् (हेर्नुस भिडियो)